Shirkii Dowlad U Samaynta Reer Tanadland Oo Dib Loo Dhigay Iyo Ciidamada Magaalada Gaalkacyo Oo La Kordhiyey. – Codka Qaranka Tanadland
Shirkii Dowlad U Samaynta Reer Tanadland Oo Dib Loo Dhigay Iyo Ciidamada Magaalada Gaalkacyo Oo La Kordhiyey.
Shirkii dowlad u samaynta umadda Tanadland oo ayaa dib loo dhigay, waxaana la mudeeyey in uu bilowdo (01/11/2017). as oo ay tahay, dad badan oo waxaa jira aaminsan in ay ka haboonaan lahayd in ergada shirka mudo intaas ka badan in la siiyo. Maadaama shir muhiimad balaaran laga leeyahay oo qamiyadda Tanad-weyne oo dhami ay isugu imaanayso. In wax 5 bilood ka yar aysan munaasib ahayn in loogu diyaargaroobo.
Marka hada ah gobalka mudug waxaa ku sugan ergooyin miisaan culus leh oo u yimid gobalka inay shirka dowlad u samaynta inay ka qayb qaataan. Balse labo todobaad ka hor lagu war geliyey codsi ah, in shirka mudo bil iyo bar ah dib loo dhiga. Cosigaas oo ka yimid jaaliyadaha dibeda oo u baahan wakhti dheeraad ah, oo shirka ka soo qaybgelid diisa ay ugu tabaabushaystaan. Codsigaas oo si xushmad leh looga aqbalay.
Ayaan dhexdeer ah, ciidamada nabadsugidda ee fariisinkoodu uu yahay xuduuda u dhexaysa xaafadda Garsoor iyo Baraxley. Oo amar u haysta inay toogasho ku dilaan cid-alaale cidii goor habeen ah xuduuda ka soo talowda. Ayaa waxay toogasho ku dileen nin subaxdii danbe loo aqoonsaday in uu yahay beesha (Reer Kuul-beer). Nin kii madhibaan beeshiisu beelaha reer (Cismaan Yuusuf) waxay ka dalbadeen, in ninkii laga diley magtiisa la siiyo.
Laakiin beelaha (Cismaan Yuusuf) arintaas waa’ay diideen oo waxay yiraahdeen, “dhanka Baraxley goor habeen ah wixii nooga yimaada inaanu layno waa sababta aanu ciidamada yada u dhignay xuduuda kala barta labada xaafadood. Nin kaanina anaguu nasoo weeraray isagoo og fariisimada ciidamadayada. Ee niman yohow madhibaan weerarka nala soo weeraray naga xaal mariya.
Dhowr todobaad markay ka soo wareegtey dhacdodaas ayaa labo nin oo beesha Madhibaan ah, oo ka soo dusey dhanka xaafadda Horumar oo aysan meelaha qaarkood habeenkii ciidamo reer Tanadland ahi aysan ka joogijirin. Niman kaasi waxay ku dhuunteen jid mugdi ah oo xaafadda Garsoor ku yaala. Waxayna ay gaadmo ku dileen nin reer Tanadland ah oo ka soo jeeda beesha reer (Xassan Muumin). Nin kaas oo la yiraahdo (Cabsiiye Maxamuud Ciiro). Labada nin ee Madhibaanka ah oo ninka reer Tanadland diley ma’aysan aqoon ninka ay dileen. Ee jid mugdiga ah intay ku dhuunteen ayey waxay ku talogaleen
qofka ugu horeeya oo jidkaas soo mara inay dilaan. Dabeedna labadaas nin iyaga oo bed qaba ayey dib ugu laabteen xaafadda Baraxley oo ay deganyihiin. Labada nin oo gacan ku dhiigleyaasha ah ayaa la aqoonsaday ina’ayahooda iyo meesha ay ka deganyihiin xaafadda Baraxley. Waxayna isxigaan nin kii dhowaan ay ciidamada nabadsugidda Tanadland ay dileen.
Arintaan ayaa dhib weyn u keeni karta jifada beesha Madhibaan ee reer Golol -ka ah hadaysan soo dhiibin ninka gacan ku dhiiglaha ah ee ninka reer Tanadland diley. laakiin arintaani wax saamayn ah kuma ay yeelan doonto jifooyinka beesha Madhibaan ee degaamada ciidka degan.
Shirkii Nabadsugidda Magaalada Gaalkacyo :-
Dhowaan waxaa magaalada Gaalkacyo ka dhacay shir lagu sugayo amaanka xaafadaha ay deganyihiin shacabka reer Tanadland. Waxaana shirkaas loogaga arinsaday sida ugu sahlan ee loo layn karo, cid allaale iyo cida isku dayda inay si dooxatayn ay u soo weeraraan xaafadaha reer Tanadland ee magaalada Gaalkacyo. Ciidamo nabadda suga ayaa laga qoray xaafadaha iyo laamaha. Waxaana la siiyey taleefano ay leedahay shirkadda (Somtel), oo ay ciidmo xaafadeedku ay ku wada xiriiraan. Shirkadda (Somtel) oo 2 sanadood ka hor ay iibsatey shirkaddii la oranjirey (Telcom) ayaa ah shirkadda shacabka reer Tanadland ay isticmaalaan.
Ciidamada nabadsugida ee ilaalinaya dariiqyada iyo wadooyinka xaafadaha aya waxaa amar lagu siiyey inay toogasho ku dilaan cid alla iyo cida ay uga shakiyaan, in nebadgelyada xaafadaha reer Tanadland fal lidi ku ah inay fulinayaan. Ciidamada nabadsugidda ee xaafadaha ayaa sidoo kale wadashaqayn doona oo markii ay qof meel fog marahaya ay arkaan, isaagaarsiinta iyaga oo adeegsanaya ku war gelindoona ciidamada fadhiya aagaga kale. Si mar kaas qof kaas loo toogto ama loo qabto.
Docda kale, weli waxaa magaalada Gaalkacyo ka socdo qaban-qaabada iyo diyaarinta meelihii ay ku soo degi lahaayeen ergooyinka shirku. Maadaama hoteeladu aysan ku filayn
wufuuda shirka ka soo qayb gelidoonta. Waxaana gudiga qaban-qaabada shirku ay goobitaan ay ugu jiraan guryo kiro ah oo mudo gaaban ah.